अझैपनि राजनीतिमा दलितको उपस्थिति न्यून हुनु दुखद - गोपाल परियार - Chitwan Press
अझैपनि राजनीतिमा दलितको उपस्थिति न्यून हुनु दुखद – गोपाल परियार
शनिबार, जेठ २१, २०७९ मा प्रकाशित
चितवन । नेपाल सरकारले जातीय विभेदमुक्त घोषणा गरेको आज १६ वर्ष पुगेको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेसँगै जातीय विभेद विरुद्धका घटनाहरु शून्यमा जान नसकेपनि विगतका केही वर्षदेखि यस्ता घटनाहरु कम हुँदै गएको देखिन्छ । सोही विषयमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य एवम् खैरहनी नगर कमिटीका एमाले सचिव गोपाल परियारसँग चितवन प्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जातिय भेदभाव १६ बर्ष पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ ?
१६ बर्ष अघि छोइछिटो प्रत्यक्ष रुपमा धेरै थिए । सार्वजनिक रुपमा थियो । गाँउघरका होटलहरुमा चिया, खाना खानु परे भाडा माझ्नु पर्थ्यो । त्यसबेला दलितलाई हेर्ने दुष्टिकोण हेलाहोचो, गाँउघरको कुनै काजकार्यमा तथा मेलापातमा सम्मान व्यवहार गरिदैन थियो । निमन्त्रणासम्म हुदैन थियो । भइहाले पनि अलग भान्साको व्यवस्था हुन्थ्यो । पानी पँधेरोमा प्रवेश गर्न पाइँदैन थियो, अपमानित हुनुपर्थ्यो। अहिले पनि पुरै अन्त्य त भएको छैन । १६ वर्षअघि जुन पीडा थियो, त्यो केही हदसम्म कम भएको छ ।
२०६८ मा दण्डको व्यवस्था भयो । त्यसपछि दलितका मुद्दा सरकारबादी मुद्दा हुने भयो । अझ २०६२÷६३ को आन्दोलनले राज्यबाट वञ्चित अधिकार दिलाउन थप सहज गर्यो । राज्यले क्षतिपूर्तीस्वरुप आरक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्यो। त्यसलाई प्रगतिशील आरक्षणका रुपमा हामीले बुझेका छौँ ।
अहिले राज्यले दिइरहेको आरक्षण पर्याप्त छ ?
छैन । हामीले भनेको जस्तो आरक्षणको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक, समावेशीका सिद्धान्तअनुसार माग गरेका थियौँ । त्यस मागलाई पुरा गर्न राज्यको हरेक नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी नपुगेका कारण चुक्यौँ । अहिलेपनि पुरातनबादी सोच र चिन्तन भएका नेतृत्वहरु नै त्याहाँ रहेका कारण र हाम्रो वर्ग पछाडि परेका कारण हामीले अहिलेसम्म पर्याप्त आरक्षण प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ ।
अझैपनि राजनीतिमा दलितको उपस्थिति किन न्यून छ ?
राजनीतिको कुरामा जित अनिवार्य हुन्छ । दलितलाई अवसरबाट बञ्चित गरिएको भन्न मिल्दैन । दलितको उपस्थिती न्यून रहेको कुरा त स्वभाविक नै हो । अहिलेको राजनीति विगतको जस्तो छैन् । दलित वर्गले राजनीतिमा उपस्थिति जनाउन खोज्दा खोज्दै पनि त्यो सम्भव हुन सकेन । त्यो दुखद छ । तर अझैपनि दलित वर्गलाई राजनीतिमा उल्लेखनीय उपस्थिती गराउने कुरामा दलहरु सचेत छन् । आगामी निर्वाचनमा दलितमात्रै नभएर पिछडीएका सम्पुर्ण वर्गलाई उचित मूल्याङ्कन गरेर उल्लखनीय संख्यामा उपस्थित गराउने कुरामा म ढुक्क छु । प्रत्यक्ष रुपमा सम्भव नभएपनि मनोनयन गरेर हुन्छ कि समानुपनतिकबाट हुन्छ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म दलित वर्गको उपस्थिति रहनेछ ।